Egwuregwu enyemaka enyemaka 5 kacha elu maka gam akporo | Androidsis
Egwuregwu enyemaka enyemaka 5 kacha elu maka gam akporo
Aaron Rivas | 27/11/2021 08:00 | Egwuregwu gam akporo, Mobiles
Nchegbu na-ezobe mgbe niile, ọkachasị mgbe anyị nwere ụbọchị siri ike nke na-adịghị eme ka izu ike. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ọ na-awakpo, enwere ike iwepụ ya, ọ dịghịkwa ụzọ ka mma isi mee nke a karịa mgbatị ahụ. N'ime ọtụtụ ndị nwere ike ịdị, enwere ọtụtụ egwuregwu na-arụ ọrụ na, karịa nke ahụ, ha na-ezube ibelata ma ọ bụ kpochapụ nchekasị kpamkpam. Ọ bụ ya mere oge a anyị na-anakọta ihe kacha mma.
Ebe ị ga -ahụ ndepụta nke egwuregwu 5 kacha mma iji zuru ike ma belata nchekasị maka gam akporo. Ha niile bụ n'efu, n'otu oge ahụ, ha so na ndị ebudatara na egwu nke ụdị ha.
3 Ihe omimi m: izu ike na nsogbu enyemaka egwuregwu
5 Ahụrụ m gị n'anya
Alto's Odyssey bụ egwuregwu nke ị ga-eji tinye bọọdụ wee merie ọkwa niile dị. O zuru oke ịtọhapụ nrụgide niile a na-akwakọba mgbe ụbọchị ọrụ siri ike nke nwere ọtụtụ ọrụ, dị ka ọ nwere ụda ntụrụndụ na-atụrụ ndụ nke na-enye udo na udo (a na-atụ aro ekweisi). N'aka nke ya, ndịna-emeputa ya abụghị ihe na-egbuke egbuke ma ọlị, ma ọ bụ na-enwe mmetụta dị egwu na-ahụ anya, ma dị nro na mmiri, n'ihi ya, ha na-atọ ụtọ ịhụ, ihe na-enyere aka nweta ntụrụndụ na ịdị jụụ.
Ọ bụ ihe egwuregwu dị mfe na-enweghị nnukwu ihe nke ị ga-ezere ọtụtụ ihe mgbochi na-apụta na egwu ahụ. Ị ga-awụlikwa elu, mee cartwheels na ihe ndị ọzọ iji chịkọta ọtụtụ isi wee nweta mkpụrụ ego niile na ihe ịma aka ndị na-apụta n'ụzọ. Oge na anya dị mkpa iji nweta na imeziwanye akara nke onwe, ya mere ọ na-atọ ụtọ, karịsịa n'ihi aghụghọ na combos nwere ike ime na jumps na ramps.
Ka ọ ghara ịdị na-akpachapụ anya, egwuregwu a nwere atụmatụ Ihu igwe mara mma na-agbanwe dị ka aja aja na ihe ịtụnanya dị ka kpakpando agbapụ na ihe ndị ọzọ. Ọ bụkwa ihe kwesịrị ịrịba ama na Alto's Odyssey na-egosi Alto dị ka onye bụ isi, mana enwere ike ịmeghe ọtụtụ mkpụrụedemede, nke ọ bụla nwere ikike dị iche iche ga-enyere gị aka ịga n'ihu na egwuregwu ahụ.
Alto si Odyssey
Mgbagwoju anya, opekempe ọtụtụ, bụ otu n'ime egwuregwu na-enye izu ike na nke dị jụụ na Play Store maka gam akporo, na Mgbachi ọ bụghị ewezụga iwu. Ọ bụ ya mere anyị ji nye ya ohere kwesịrị ekwesị na post a, n'ihi na ọ bụ egwuregwu nwere ụda ụda dị jụụ na ihe egwuregwu nke ị ga-eji dozie mgbagwoju anya na 3D.
Ya mere, ọ bụ maka mgbagwoju anya. Na Interlocked ị ga-edozi ha niile. Ha nwere ike bụrụ ihe ịma aka ebe ọ bụ na a na-ewu ụfọdụ n'ụzọ dị ịtụnanya na nke na-atọ ụtọ, ọrụ gị bụ ịghọta ha iji chọpụta ka iberibe ndị ahụ jikọtara ha na-ejikọta ọnụ, wee kewaa ha.
Wepụta oge gị, emela ọsọ ọsọ mee ya nwayọ. Cheta, ihe mgbaru ọsọ bụ izu ike na ịhapụ nchekasị. Gee ntị na ụda egwu egwuregwu ahụ wee jiri udo nke uche dozie mgbagwoju anya. N'ụzọ dị otú a, ị ga-enwe ike nweta ihe kacha mma na Interlocked.
Developer: Egwuregwu Armor
Ihe omimi m: izu ike na nsogbu enyemaka egwuregwu
Ị na-ata ahụhụ site na andiety? Ị nwere nrụgide? Ọtụtụ n'ime egwuregwu ndị dị na Play Store maka gam akporo bụ maka ntụrụndụ na asọmpi, nke na-adịghị enyekarị aka izu ike, ma ọ bụ ee, dabere ma ọ bụrụ na-amasị gị. N'otu aka ahụ, egwuregwu e mere iji nweta udo na ịdị jụụ bụ nke a, Oasis m.
Wepụta oge, were ezumike wee mikpuo onwe gị n'ime ụwa nke oasis m. N'ebe a, ị ga-anakọta ọnụ ọgụgụ obi kachasị ukwuu iji nweta anụmanụ dị iche iche dị ka foxes, giraffes, whale, enyí na ndị ọzọ. Jiri Island Builder wee soro ndụ ndị gbara gị gburugburu gbasaa ya. Ihe niile na-eme n'ime ikuku dị jụụ nke na-enye udo, ma maka eserese ya na ụda ya na maka egwuregwu egwuregwu nke egwuregwu a nwere, nke dị mfe ma na-atọ ụtọ. Ma ọ bụ na, dị ka onye nrụpụta na-akọwa ya, "ọ na-enye gburugburu zen na ikuku dị jụụ nke e wuru maka ndị nwere nchekasị, iji nweta ahụ efe site na nrụgide ahụ."
Developer: Buff Studio (Egwuregwu Akụkọ, Egwuregwu Calm)
N'ime ndị dị mfe nke na-adịghị mkpa nnukwu nkà, PUSH bụ otu n'ime ihe kachasị mfe na nke dị nnọọ iche, n'ihi na na nke a, ị ga-pịa bọtịnụ. Ee, dị ka ọ dị. Naanị ị ga-pịa ihuenyo ọtụtụ oge, mana jiri mgbaghaEe, ebe ọ bụ na ị ga-edozi ọtụtụ egwuregwu mgbagwoju anya na-adịghị adị mgbagwoju anya, nke zuru oke ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịdọpụ uche gị ma ọ dịkarịa ala otu oge.
PUSH bụ egwuregwu na-adịghị agwụ agwụ. Ọ nwere ọtụtụ mgbagwoju anya na ọ nweghị ndụ ị ga-atụfu, ọ nweghị ndị isi ma ọ bụ ndị ọjọọ na-eche ihu. Ọ bụ naanị gị na egwuregwu mgbagwoju anya na-apụta mgbe niile ka ha na-enyere gị aka izu ike ma, n'ụzọ dị otú a, hapụ nrụgide na-akpakọba n'ụbọchị siri ike.
Developer: Ogwurugwu Ugwu
Ịga n'ihu na egwuregwu ntụrụndụ kacha mma maka gam akporo, anyị nwere Ahụrụ m Hue n'anya, aha na-enye nkwekọ maka agba ya na ụdị ochie ya.
Ike ya dị mfe, dị mfe ma dị jụụ: A ghaghị ịhazi taịlị ndị na-acha agba iji nweta nchikota pụrụ iche na usoro ihe nkiri. Ma ọ bụ egwuregwu mgbagwoju anya na-atọ ụtọ nke, n'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, na-abịa na ọtụtụ egwuregwu mgbagwoju anya ka edozi ya.
Dị mfe, dị mfe ma na-atọ ụtọ; Ndị a bụ ihe atọ na-enweghị ike ịla n'iyi na egwuregwu ntụrụndụ nke na-achọ ịhapụ nchekasị ma nweta udo, udo na obi iru ala. Ọ dịkwa mma maka ndị ọrụ nke afọ ọ bụla, yabụ ụmụaka, ndị nọ n'afọ iri na ụma, ndị okenye na ndị agadi nwere ike igwu ya ngwa ngwa. Onye ọ bụla chọrọ ikpochapụ uche ya, kpọọ I Love Hue.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Egwuregwu enyemaka enyemaka 5 kacha elu maka gam akporo
Mụta ofufe 3 Koodu